Ny fampiharana Android dimy tsara indrindra ho an'ny mpitendry mozika | Androidsis
Eder Ferreño | | Fampiharana Android, Mozika maimaim-poana, Tutorials
Mihamaro ny olona manao mozika, na ho matihanina na ho fialamboly fotsiny. Ho azy rehetra, Fampiharana Android tena ilaina dia nipoitra rehefa nandeha ny fotoana. Misaotra azy ireo fa somary mora kokoa ny fanatanterahana an'io asa amin'ny maha mpitendry mozika io azy. Noho izany, etsy ambany dia mamela anao hisafidy sasany amin'ireto fampiharana ireto izahay.
Fampiharana fisaorana izay ahafahanao manatanteraka asa isan-karazany, izay hanamora kokoa ny fiasanao mozika. Noho izany antony izany, antenaina fa hahasoa anao ity safidin'ireo fampiharana Android ity, na inona na inona karazana mozika misy anao.
Ireo rindranasa rehetra nampidirinay tao amin'ity lisitra ity misy ao amin'ny Play Store. Ka ny fahazoana mihazona azy ireo dia ho zavatra tena tsotra. Azonao atao ny manomboka mampiasa azy ireo haingana araka izay tratra. Vonona ny hihaona amin'izy ireo?
1 Hi-Q MP3 Recorder Voice
3 Tuner - maimaim-poana gStrings
5 Vivace: Famakiana mozika
Hi-Q MP3 Recorder Voice
Manomboka amin'ny rindranasa iray izay tena ilaina tokoa ho an'izay te hihira. Misaotra an'ity rindranasa ity dia afaka manoratra ny feonao ianao. Ity no lahasa lehibe indrindra ao aminy, ary tsy fampiharana manome antsika fanampiny fanampiny izany. Na dia manana asa fanampiny fanampiny aza isika ahafahantsika manatsara ny fampiasana azy. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mirakitra hevitra, hevitra na fiasana amin'ny hira izay noraketintsika tamin'ny fotoana iray. Tsotra ny interface misy azy, saingy mandeha tsara izy io ary manatanteraka ny iraka ampanaovina azy amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izay, tsy mahita karazana fividianana na dokam-barotra ao anatiny izahay. Ka tsy hisy zavatra hanelingelina antsika raha ampiasaintsika.
Hi-Q MP3 Voice Recorder (Maimaimpoana)
Faharoa, mahita rindranasa izay efa fantatry ny maro aminareo izahay. Misaotra azy izahay fa hanao hahafahana mirakitra ny mozikantsika manokana amin'ny fomba tsotra. Io dia ahafahantsika mirakitra ny mozikantsika, ary manana fiasa fanampiny ahafahantsika mifangaro sy manampy effets sasany. Ny zavatra mahaliana amin'ity rindranasa ity dia tsy natao hiara-miasa amin'ny mozika elektronika, toy ny ataon'ny hafa amin'ny fomba. Fa azontsika ampiasaina amin'ny zavamaneno mivantana izy io. Interface tsara, izay manamora ny fampiasana azy amin'ny fotoana rehetra.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Ho fanampin'izany, ao anatiny dia tsy manana fividianana na dokam-barotra isan-karazany isika.
BandLab: Studio studio sy tamba-jotra sosialy
Tuner - maimaim-poana gStrings
Ny gitara dia iray amin'ireo fitaovana malaza indrindra amin'ireo mpitendry zavamaneno maro. Raha manana iray isika dia tsy maintsy ataontsika izay hahamasoana azy amin'ny fotoana rehetra. Ho an'ity, azontsika atao ny mampiasa ity rindranasa ity izay ahafahantsika maneno ny gitara. nyNa dia ny tena zava-misy aza dia ho afaka hanamboatra saika mitovy ny tadin-tsarimihetsika rehetra isika. Ka ho afaka hivoaka betsaka amin'izany isika amin'ny fotoana rehetra. Raha ampianay fa manana interface tsotra, intuitive ary tena mazava izy io, dia ataon'izy ireo ho safidy tsara indrindra raha toa ka tsy maintsy ataontsika ny lokanga. Tena ilaina ny fampidinana azy.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Ny fividianana dia natao hanala doka. Tsy doka manelingelina izy ireo, fa raha tianao dia afaka mandoa vola ianao hanesorana azy ireo.
Fampiharana tsara raha toa ka tsy maintsy miasa miaraka amina mozika ravinalaNa mpihira ianao na mitendry zavamaneno. Ity rindranasa ity dia hanampy anao raha hanao fanazaran-tena amin'ity karazan-kira ity. Vondrom-piarahamonina mampakatra isa matetika izy, noho izany manana mozika betsaka izahay ao. Ho fanampin'izay, afaka mampakatra ny atiny ho antsika ihany isika, na dia mety handany asa sasany aza ny endrika sy ny fomba fampidinana azy. Na dia fampiharana tsara aza izy io izay ahafahantsika mampihatra izay rehetra tadiavintsika.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita fividianana ao anatiny aza isika. Tsy fividianana an-tery ireo.
MuseScore: Mijery sy milalao isa
Vivace: Famakiana mozika
Izahay dia mamita ity lisitra ity amin'ny fampiharana iray izay tena hahasoa anao maro. Izy io dia fampiharana izay hanampy antsika hamaky mozika lamba sy handika ireo naoty mozika io. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika milalao karazan-dahatsoratra sy sanganasa isan-karazany isaky ny maniry. Safidy tsara ho an'ireo mpampiasa manana olana rehefa mamaky naoty, satria ny zava-drehetra dia hazavaina tsikelikely ary hazavaina tsara. Ka ny fampiasana azy no mahafinaritra sy tsotra indrindra amin'ny fotoana rehetra. Ary koa, manana angon-drakitra lehibe misy mozika ao anatiny izahay, koa misy ohatra manampy.
Developer: Studio studio Dreamhound
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Mozika maimaim-poana » Fampiharana Android tsara indrindra ho an'ny mpitendry mozika
Sony dia nanambara ny daty handraisan'ny findainy Android 9.0 Pie
Fampivoarana ny Motorola One Features: OS, RAM, ary Speed ​​Speed ​​Processor